China Mkpọ tomato mado 70g ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Tomato
Tomato mado bụ otu n'ime nri ụbọchị. Ọ nwere ike ịme ka nri dịkwuo ụtọ ma sie ike maka ndị mmadụ. Anyị nwere ike ime dị iche iche dị ka kwa ahịa 'na-arịọ na ahịa mma ọkọlọtọ, na mado bụ nkịtị tomato eke-acha ọbara ọbara na agba, 100% na-enweghị nwekwara, oké na ọ dịghị mmiri. Anyị nwere ike ime GINO mma tomato mado.
Nke gara aga: tomato mado 2200g
Osote: Mkpọ tomato mado 70g (2)